अर्धबैसे आइमाईसँग बागबजारको होटलमा भएको रमाइलो चिकामारी
शुरुमा मेरो परिचय म तपाईहरुको नै सपनाको राजकुमार हुँ । जो कोहीले पनि मलाई आफ्नो deeam boy बनाउन सक्नुहुन्छ । मिराकल टिन डटकम डट एनपीमा प्रकाशीत यस अगाडीका मेरा दुईवटा स्टोरीहरु तपाईहरुले धेरै मन पारिदिनुभयो अनि धेरै मेलहरु पनि आए । कतिपयले गाली गरे त कतिपयले अफर पनि गरे । जे होस् यस अगाडिका मेरा कहानीहरु घरबेटी दीदीलाई चिकेको कथा अनि होटलमा सुड्डी आन्टी चिक्दा पूर्ण सन्तुष्टिको पाएको अनुभव यी दुबै पढेर तपाईहरुले दिएको मायाले गर्दा फेरी अर्को काहानी लेख्दै छु ।
रातको 11 बजिसकेको थियो मलाई निन्द्रा आएको थिएन । के गरु कसो गरु भईरहेको थियो । निद्रा नपरेकोले फेरी कम्युटर ओपन गरेर मेरो याहु म्यसेन्जर ओपन गरे त्यहाँ कुनै नयाँ ब्याक्तिले मलाई एड गरेको रहेछ । अफलाईन म्यासेज; जसको स्वरुप यस्तो थियो - (Hi , Timro kahani miracleteen.com.np ma maila pade ani timi lai bhatna man lagyo please mail gara la malai saathma timro phone no. pani diyara) मैले यसको जवाफ पनि दिएँ अनि मेरो मोवाईल छैन भनी झुट भनेँ । किनकी मलाई डर लाग्यो को हो के हो भनेर । अनि ईमेल खोलेर हेरेको त त्यही आईडीबाट मेल पनि आएको रहेछ । जसमा उसको फोन नं पनि थियो नाम हेर्दा केटीको जस्तो लाग्थ्यो तर मलाई शंका थियो कि कुनै केटाले झुक्याको भनेर । यत्तीकैमा मोवाईलाम नं सेभ गरेँ अनि सुत्ने तरखरमा लागेँ । भोलीपल्ट बिहानै उठेर बाहिरतिर निस्केँ । केही साथिहरु भेटेर एकछिन रमाईलो पनि गरियो अनि फर्कने क्रमामा बाटोमा फोन पसल देखेर फेरी हिजोको कुरा सम्झेँ अनि एक कल गर्नु पर्यो को रहेछ भनेर मैले फोन गरेँ त्यो मोवाईलामा तर त्यहाँ पनि एक छिन झन्झट नै बेहेर्नु पर्यो । एउटी दिदीको “तपाईले सम्पर्क गर्ने खोज्नु भएको मोवाईलमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन कृपया केहीछिनपछी पुनः प्रयास गर्नु होला…” यही आवाज दुई तिन पटक सुनेपछी फोन लाग्यो । फोनमा एउटी महिलाको आवाज आयो । म ढुक्क भएँ कि कसैले मलाई चिट गरेको रहेनछ भनेर । उनले मेरो परिचय मागिन मैले भने रोमान्स ब्वाई । उनले मेरो यती भन्दा नै मेरो कुरा बुझीन अनि भनिन् - तिम्रो रिप्लाई पाएकी थिएँ मलाई भेट्ने हो भनिन् । तर मैले कसरी भेट्ने चिन्नु न जान्नुको मान्छेलाई भनी ठाडो जवाफ दिएँ । उनले निकै नम्र भएर कुरा गरिरहेकी थिईन । उनले मेरो उमेर सोधिन मैले 21 भने अनि आफु 25 भएको कुरा गरिन् । अनि कुरै कुरामा हाम्रो भेट्ने कुरा भयो । अनि म मेरो रुमतिर लागेँ ।
भोलीपल्ट बिहान 10 बजे नै म उनले बोलाएको ठाउमा गएँ । अनि उनी आउने बाटो हेरी कुरेर बसेँ तर म उनले बोलाएको भन्दा आधा घण्ट अगाडी नै त्यहाँ पुगेको थिएँ । केही बेरपछी मैले पुनः नजिकैको टेलिफोन पसलमा गई उनलाई फोन गरेर सोधेँ किन मलाई ढाँटेको आउने होईन भनेर तर उनले आईसकेको कुरा गरिन । अनि फोन गर्दै यसो हेरेको त एउटा अर्धबैशै महिला फोन लिएर सडकको कुनै कुनामा कुरा गरिराखेको देखेँ । अनि अन्दाज पनि लगाए पक्कै यही हुनुपर्छ भनेर । अनि म उनको नजिक गएर सोधेँ - "किन तपाईले मलाई आफ्नो उमेर ढाटेको ?"
एक अन्जान ब्याक्तिले यसरी उनीसँग यसरी कुरा गर्दा उनि दंग परिन, अनि सोधीन तिमी को ? मैले हिजो फोन गर्ने केटा भनेर भनेँ । उनले जवाफमा किन म राम्री छैन भन्ने जवाफ दिईन । हो हुन पनि उमेरमा 30 नाघेकी भएपनि उनको शरिर निकै आकर्षक थियो । पोटीला स्तन अनि रातो कुर्ता सुरवालमा उनि निकै सेक्सी देखीएको थिईन् । उनको पहिरानबाट नै थाहा भयो कि उनी एक उच्च परिवारकी हुन् भनेर । अनि मैले जोकिङ गरेको नि भनेँ । उनले नजिकै आएको ट्याक्सी रोकेर जाउँ भनिन् । मलाई एक्कासी उनको ब्यवहारले निकै डर पनि लाग्यो तर जे पर्ला पर्ला भनेर म उनको साथमा गएँ । उनले ट्याक्सी वालालाई बागबजारको कुनै होटलको नाम दिई त्यहाँ लान भनि । अनि बाटोमा कुरा गर्दा गर्दै हामी त्यो होटलमा गयौ । होटेलमा पुगेपछी म उनको पछी पछी थिएँ । हामी होटेलको एउटा कुनाको टेवलाम पुग्यौँ । म उनलाई फलो गर्दै थिएँ । म केही बोलेको थिइन । उनले त्यहाँ पुगेपछी दुईवटा चिसो अर्डर गरिन् । मैल चिसो पिउदै उनलाई हेरीरहेको थिएँ । मैले कुनै कुरा बोलेको थिईन । उनले वेटरलाई चिसोको पैसा दिईन अनि वयटरले पैसा फिर्ता दियो । उनले सबै पैसा उसलाई नै राख्न लगाईन अनि रुमको कुरा गरिन् । वेटर पनि धेरै टिप्स पाएर होला निकै खुसी हुँदै रुमको साँचो लिएर आयो ।
त्यसपछि उनले मलाई भनिन् - "भाई तिमी चाबी लिएर माथि जाउ म आउछु ।" अनि उनले वेटरलाई भन्दै थिइन; "यो मेरो गाउबाट आएको भाई हो । काठमाण्डौमा नयाँ छ बिदेश जानको लागी आएको भनिन् । वेटरले पनि उनलाई एजेन्ट हो भन्ने सोँचेछ क्यार हाम्रो कुरामा केही वास्त गरेन । म रुममा गई उनलाई कुरेर बसेको थिएँ । आधा घण्टापछी बल्ल उनी रुममा आईन । मैले उनलाई किन ढिला गरेको भनी सोधेँ । उनले भनिन् - "ईज्जतको पनि त ख्याल गर्नु पर्यो नि त… ।" मैले धेरै केही सोधिनँ । हातको ब्याग टेवलमा राख्दै उनले भनिन् - "हेर्दा त धेरै कुल र ह्यान्सम देखिन्छ तिमी ।" म पनि मौकाको फाईदा उठाउदै तपाई पनि त केही कमी छैन भन्दै उनको स्तनमा समातेँ तर उनले किन हतार भन्दै मेरो निधारमा एक किस गरिन् । मलाई सबै कुरा सपना जस्तो लागेको थियो बेला बेलामा सपना त होईन भनी आफ्नै हात चिमोटी हेर्थे तर म बिपनामा नै थिएँ ।
हामीहरु एक अर्कोको नजिक बसेर कुरा गर्दै थियौँ । मैले मेरो बारेमा भनेँ उनले पनि आफ्नो बारेमा भनिन् । मैले बिस्तारै कुराको सिलसिलामा नै मेरा हात उनको स्तनको वरिपरी सुम्सुमाउथेँ । मलाई निकै मजा आईरहेको थियो । उनको स्तन पनि निकै कसिलो हुदै गएको थियो । स्तन सुम्सुमाउदै मेरा हात उनको पेट हुदै उनको साप्रासम्म पुग्यो अनि एक हातले मैले उनको हिप पनि सुम्सुमाउदै थिएँ । यत्तीकैमा मेरो भाई निकै पोटीलो भएको थियो । पाईन्ट नै छेड्ला जस्तो गरी रन्किएको थियो ।
मैले उनलाई आफ्नो कुर्ता खोल्न आग्रह गरेँ । उनले लाज नै नमानी एकै पटकमा खोली दिईन् । उनले कालो ब्रा लगाएकी थिईन कालो ब्रा मा उनका पोटीला स्तन निकै राम्रा देखिन्थे । मन मनमा मलाई उनको दुध खान मन लागेको थियो तर मैले हतार गरिनँ किनकी म उनलाई धेरै मजा दिन चाहान्थे । सायद उनले पनि मेरो काहानी पढेर मैले राम्रो मजा दिन सक्छु भन्ने बिश्वसले गर्दा नै आफ्नो सबै शरिर सुम्पिन तयार भएकी थिईन् । मैले उनको बिश्वास मार्ने हुन्न भन्ने सोचेको थिएँ । त्यसैले मैले उनलाई धेरै मजा दिन्छु भन्ने अटोट गरेको थिएँ । केही बेरमा मैले उनको ब्रा पनि उनको शरिरबाट अलग गरिदिएँ । मेरो अगाडी अर्धा नग्न महिला देखेर म निकै कामुक भएको थिएँ । बिना कपडामा मैले उनको नाड्गो स्तन माड्न थालेँ । केही बेरमा नै मैले उनको स्तन बच्चाले जस्तै चुस्न थालेँ । उनलाई निकै काउकुती लागेको होला सायद त्यसैले बिच बिचमा आ… ह… आह्ह… आह्ह… ऽइस्स्स… जस्ता सुस्केरा निकाल्दै थिईन । निकै बेरको चुसाईपछी मेरा हात उनको दुई खुट्टाको बिचमा लगेँ । तर त्यहाँ सुरवाल पनि थियो । मैले एकै झट्कामा उनको शरिरबाट सुरवाल अलग गरीदिए अनि उनको गुलाबी कट्टुको बाहिर हात फिरफिराएको त सबै चिसो थियो । अनि अझै बढी हात यता उता परेको त मेरो हातमा कुनै चिल्लो पदार्थ टाँसियो । मैले उनलाई प्रश्न गरे यो के हो ? उनले हाँस्दै जवाफ दिईन - पानी पो झरेछ ।
उनको स्वाभाव निकै सोझो थियो । हुन त बलीरहेको ज्वाला शान्त पार्नलाई होला उनि चुपचाप बसेकी । जो कोही पनि उनलाई नजिकबाट हेर्दा उनि यति चिकुवै छिन् भनेर पत्याउने थिएन होला । चकचकेले गाल पार्यो घुसघुसेले ताल पार्यो भन्ने उखान उनमा लागु भएको थियो । म पनि उनको सोझोपनबाट निकै खुसी थिएँ । सपनामा जस्तो अनुभव भएको थियो । मैले उनको योनीको वरिपरी मेरा हातहरु निकै सलवलाएको थिएँ । हुन त मैले उनको स्तन जोडले चुसेर होला उनको यौनीबाट प्यासको खोलो बगेको । मलाई लागेको थिएन उनले यति धेरै पानी झार्छिन भनेर तर उनको दुलोबाट झरेको पानीमा निकै मिठो सुवास थियो । लाग्थ्यो सबै एकै पटक पिइदिउ तर मन सम्हाल्दै थिएँ । त्यतिकैमा उनले मलाई आफुबाट अलग गरिन् । अनि मेरो सट फुकाली दिईन अनि बिस्तारै पाईन्ट पनि । उनले मेरो फन्फनाउदो माललाई कट्टु बाहिरबाट स्पर्स गर्दै आफ्मै आज गतिलै माल चाख्न पाईएला जस्तो छ भन्दै थिईन । उनले मेरो कट्टु मबाट बाहिर गराईन अनि मेरो भाईलाई हेर्दै भनिन् - “आम्मै केटाको तुरी त गतिलै छ त" । उनको यो कुराले म झन् पागल भएँ । उनि मेरो मालको दर्शन पाएर निकै खुसी थिईन । उनले बिस्तारै मेरो भाईलाई आफ्नो नरम हातले सलबलाउन थालिन् । अनि मैले पनि उनको शरिर सुम्सुमाउदै थिएँ । उनले मलाई बेडमा उत्तानो पारेर लडाइन । आफ्नो कपाल मुखबाट हटाउदै आफ्नो ओठले मेरो भाईलाई किस गरिन् । म सहनै नसक्ने भएको थिएँ । तर कुनै जवाफ दिएको थिएनँ । उनले भनिन - "पहिला तिम्रो धाराको पानी म पिउछु अनि मात्र म तिमीलाई मेरो कुवाको पानी खुवाउछु ।" यति भन्दै उनले आफ्नो मुखमा मेरो भाईलाई लगेर चुस्न थालिन । मलाई निकै मजा आईरहेको थियो । म दंग पनि थिएँ । उनले लगातार चुस्दै थिईन । मैले उनलाई सोधेँ - "तपाईले बुलु फिल्म हेर्नु हुन्छ र ? उनले प्रतिउत्तमा जवाफ दिईन, किन ? मैले फेरी सोधेँ - नेपाली केटीहरु यस्तो मुखमा लिन घिन मान्छन नि त । तर उनले जवाफ फर्काई हालीन किन घिन मान्नु यो कुनै नराम्रो कुरा हो र ? बुलु फिल्म त आजकल नर्मल नै हो नहेर्ने को पो होला र अनि मैले बल्ल थाहा पाएँ की उनको बारेमा । अनि उनको चुसाईले मेरो माल झर्ला जस्तो भएको थियो । मैले उनलाई भने मेरो माल झर्ने लाग्यो । उनले भनिन - मेरो मुखमा नै छोड । म पनि के कम थिएँ र, एकै पटक रोकेर सबै झारीदिएँ । उनले छि भन्दै सबै माललाई ट्वाईलेटमा गएर मुखबाट फालीन अनि फेरी टावल लिएर मेरो भाईलाई सफा गरिन् । म सिथिल भएको थिएँ । केही छिनको हाम्रो कुरापछि म फेरी उत्तेजीत भएँ । उनलाई सुम्सुमाउन थालेँ अनि उनी पुनः जोशमा आईन । मैले उनको स्तन फेरी चुस्न थालेँ । मेरो स्पर्षले फेरी उनको यौनीबाट पानीको धारा बग्न थाल्यो । उनले म तिर हेर्दै मेरो पनि चाटन भनिन । मैले घिन लाग्छ भन्दा मेरो चाही हुने तिमी चाही नहुने प्लीज भनिन् । उनको धेरै बेरको करपछी म बाध्यतामा परेर सोचेँ - “कसैले पानी दिन्छ भने पानी खाएर भाडो फल्नु हुँदैन ।" अनि जिब्रोले उनको यौनीको रातो हिमालमा टच गरेँ । तर उनको यौनीबाट धेरै पानी बगेको हुनाले मेरो मुखमा जताततै उनको नुनिलो चिप्लो पानी टाँसियो । हुन पनि मलाई लागिरहेको थियो म उनको पोखरीमा पौडी खैल्दै छु । मलाई पनि निकै मजा महसुस भईरहेको थियो । उनी पनि त्यस्तैनै कामुक देखीन्थिन । आह्… आह्ह… आह्ह… आह्ह… आओ… आम्म… ओउ… वा… इस्स्स… उम्म… उम्म्म… यस्ता शब्दहरु उनको मुखबाट निस्किरहेका थिए । मैले उनको यौनीमा मेरो जिब्रोले टच गर्दा उनी झनै उत्तेजित हुन्थिनँ । मैले पनि निकै बेर उनको यौनीमा मेरो जिब्रो लगाई राखेँ । अनि उनको योनीबाट अझै धेरै पानी बग्यो । मैले मेरो जिब्रो निकालेर उनको मुखमा जोडे अनि एक अर्कोमा हामीले जिब्रोको स्वाद लिईरह्यौँ । केही बेरमा मैले मेरा औलाहरु उनको यौनीमा हाल्न थालेँ । उनि जोशले होशमा थिईनन् । मेरा औला जति भित्र जान्थे उनी त्यती उत्तेजित हुदै आफ्नो ढाड माथि सार्थिन । उनको योनीबाट निस्किएको पानीले बेडमा खोला नै बग्यो । मलाई पनि अचम्म लाग्यो यति धेरै पानी बगेको देखेर । जे होस् मैले पनि एउटा नयाँ अनुभब गरेको थिएँ । निकै बेरको फोर प्लेपछी उनले सहन सकिनन् । प्लीज प्लीज भयो अब मेरो दुलोमा हाल न, च्यातिदेउ न मेरो पुती भन्दै बर्बराउन थालिन् । मैले आफ्नो फनफनाई रहेको माललाई एक स्वाटमै उनको योनिभित्र पसाउने सुरले भित्र हालेँ तर त्यति धेरै पानी बगेर चिप्लो हुँदापनि एकै पटकमा पसेन । मैले दोस्रो धक्का दिएँ अनि बल्ल पुरै भित्र पस्यो । त्यसपछि उनको शरिरमा अनौठो कम्पन भयो । उनले बेग्लै फिलीङ गरिन् । भन्दै थिईन - "जिवन भर नै यसरी नै मजा देउ मलाई मेरो राजा… ।" म पनि ल्वाम ल्वम मेरो भाई भित्र बाहिर बनाउदै थिएँ । हाम्रो चिकामारी लगभग दस मिनेटजति चलिरह्यो । त्यसपछि उनी चरमा आनन्दाम थिईन । आखाँ बन्द गरेर याह्ह… याह्ह… याह्ह… याउउम्म… उम्म्म… वेल डन… यु फक्ड वेल… थ्यान्क्यु माई डियर… आह्ह… आह्ह… आम्म… उह्हु… उह्हु… गर्दै सिथिल भइन । मेरो माल अझै घरेको थिइन । पाँच दस धक्का मारेपछि मेरो शरिरमा पनि अनौठो तरङ्ग उत्पन्न भयो । मेरो शरिर पुरै खुम्चिएर सिरिङ्ङ हुन आयो । तब मैले आफ्नो भाइ बाहिर निकालेर पच्यात… पच्यात… पिच्रित… पिच्रित… पिच्रित… प्लात… प्लात… गर्दै उनको योनी मेरो माल उनको भित्र झारिन बाहिर झारेँ । किनकी गर्भ रहन गए यसले फेरी पछि झ्याउ हुन सक्छ भनेर बाहिर शरिरमा मेरा फोराहरु फिजाईदिएँ । म पनि शिथिल भएर उनको नाङ्गो छातिमाथी लम्पसार परेर सुतेँ ।
हामी एक अर्कोको अंगालोमा बाधिएर करिब बिस मिनेट थकाई मार्यौँ । अनि मैले उनलाई आँखा झिम्क्याउँदै सोधेँ - "मजा आयो ?" उनले भनिन् - जिवनमा पहिलो पल्ट यति मजा लिएँ । तिमी मेरो जिवनमा ईश्वरको बरदान बनेर आयौ । मेरो लागी तिमी देवता हो भनिन् । हुन पनि मलाई पूर्ण विश्वास थियो कि मैले उनलाई सन्टुष्टी दिएँ भनेर । त्यो दिन बेलुकासम्म हाम्रो करिव चार पटकसम्म चिकाई भयो । बेलुका उनले फेरी भेट्ने बाचाका साथ मालाई बिदा गरिन् । अनि म पनि खुसी भएर रुममा फर्केँ । यसको एक महिनापछी उनको बुढा पनि बिदेशबाट फर्केछ । उनले मलाई मेलमा जानकारि दिईन । अनि भन्दै - "बुढाबाट मैले सन्टुष्टी पाउन सकेकी छैन, फेरी पनि मेरो प्यास बुझाईदेउ ल…" तर समयले गर्दा हाम्रो भेट भएको छैन आशा छ एक दुई महिनामा अबस्य हाम्रो चिकामारी हुन्ड नै ।
कृपया यो वेवसाइटलाई आफ्नो मोबाइल ब्राउजरको बुकमार्कमा सेभ गरेर दिनदिनै यस्तै असिमित यौन कथा पढ्न नबिर्सिनु होला । धन्यबाद…
अर्धबैसे आइमाईसँग बागबजारको होटलमा भएको रमाइलो चिकामारी 2017-07-05T23:07:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
18+ story adult xxx story erotic story fucking story Nepali Sex Story Sex Story अर्काको बुढी चिकेको कथा चिकेको कथा नेपाली युवा साहित्य यौन कथा सुड्डी चिकेको कथा
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: अर्धबैसे आइमाईसँग बागबजारको होटलमा भएको रमाइलो चिकामारी